तपाईँको आज - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७८ असार २५ गते ११:५१ मा प्रकाशित
सबैले भनेको सुन्नुहोस्, तपाईंका समस्याको समाधान पाउन सक्नुहुनेछ। मनोरञ्जन वा कस्मेटिक सुधारमा पनि धेरै खर्च नगर्नुहोस्। आफन्तहरू र साथीहरूलाई तपाईंको आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नदिनुहोस्, नत्र तपाईंले चाँडै आफ्नो बजेट उँचो पाउनु हुनेछ। सपनाको चिन्ता छोडेर आफ्नो रोमान्टिक साथीसँग आनन्द मनाउनुहोस्। आज तपाईंले काममा राम्रो महसुस गर्नु हुनेछ। आज यात्राको लागि धेरै राम्रो दिन छैन। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको बारेमा सबै राम्रो कुरा गरेर प्रशंसा गर्नेछिन् र तपाईंको लागि समर्पण गर्नेछिन।
आध्यात्मिक जीवनको लागि जरूरी भएको तपाईंको मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्नुहोस्। राम्रो नराम्रो सबै दिमागको माध्यमबाट आउने हुनाले मन जीवनको द्वार हो। यसले जीवनका समस्याको समाधान गर्नमा मद्दत गर्छ र चाहिएको प्रकाश प्रदान गर्दछ। आज अचानक रोमान्टिक कुराहरू निस्कने सम्भावना छ। नियमित वैवाहिक जीवनमा, यस दिनले स्वादिष्ट मिठाईको रूपमा कार्य गर्नेछ।
आफ्नो बाध्यात्मक भावना र धडकनहरूमा रोक लगाउनुहोस्। आफ्ना रूढिवादी सोच / पुराना विचारहरूले तपाईंको प्रगतिमा बाधा ल्याउँछ, विकास गडबडाउँछ र अगाडि बढ्न बाधा दिन सक्छ। सबै प्रतिबद्धता र आर्थिक कारोबार ध्यानपूर्वक गर्न आवश्यक छ। आफ्नो परिवारको हितको लागि कठिन काम गर्नुहोस्। तपाईंको कार्य प्रेम र सकारात्मक दृष्टिद्वारा गरिएको हुनुपर्छ, तर लोभद्वारा होइन। आज रोमाञ्चक दिन हुनेछ किनकि तपाईंले आफ्नो प्रियबाट उपहार / इनाम प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज तपाईंले आफुले राम्रो काम गरिरहेको आफ्ना परिवारको समर्थनले हो भन्ने कुराको महसुस गर्नु हुनेछ। तपाईंलाई आफ्नो वैवाहिक आनन्दको लागि एउटा अचम्मको आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
आफ्नो वजनमा ध्यान दिनुहोस् र धेर नखानुहोस्। अचानक धनको लाभ हुनाले तपाईंको बिल र तत्काल खर्च पूरा गर्नेछ। आज तपाईंमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरू र साथै साथीहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्नाले नयाँ उत्साह र आत्मविश्वास जाग्नेछ। तपाईं पहिलो नजरमा प्रेममा पर्न सक्नुहुन्छ। यो अन्य देशहरूमा व्यावसायिक सम्पर्कका सुधार ल्याउने एउटा उत्कृष्ट समय हो। तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन? आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
स्वास्थ्य पूर्णत ठीक रहनेछ। यदि तपाईंलाई कहिल्यै नगएको ठाउँमा आमन्त्रित गरिन्छ भने अनुग्रहपूर्वक निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुहोस्। एक अर्कालाई राम्ररी बुझ्नको लागि तपाईंले आफ्नो प्रेमी सँगै समय बिताउनु आवश्यक छ। तपाईंले आफ्नो ज्ञान र अनुभव अरूसँग बाँट्नुभयो भने तपाईंले पहिचान बनाउनु हुनेछ। तपाईंलाई पाएर तपाईंको जोडी आफैंलाई भाग्यमानी मान्छ जस्तो लाग्छ। आज यस क्षणको राम्रो उपयोग गर्नुहोस्।
तपाईंले आज गरेका केही शारीरिक परिवर्तनहरूले तपाईको ढाँचामा पक्कै बृद्धि हुनेछ। आर्थिक सुधार भएमा तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण खरीद गर्नको लागि सुविधा हुनेछ। तपाईंको आकर्षण र व्यक्तित्वले केही नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। तपाईंले आफ्नो उत्तम व्यवहारमा हुन आवश्यक छ – किनभने आज आफ्नो प्रेमीलाई नराम्रो लाग्न धेरै केही हुनु पर्दैन। आफ्नो क्यारियरको आशा बढाउनको लागि आफ्नो व्यावसायिक शक्तिको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो गतिविधिको क्षेत्रमा असीमित सफलता पाउने सम्भावना छ। धेरै फाइला पाउन आफ्नो सबै कौशल लगाउनुहोस्। आफ्नो जोडीको अशिष्ट व्यवहारले आज तपाईंलाई केही कष्ट हुन सक्छ।
बच्चाहरुसँग खेल्नाले तपाईंलाई धेरै शान्तिको अनुभव हुनेछ। तपाईंले आशा गरेझै काम गर्न असफल हुनाले बच्चाहरुले निराश गराउन सक्छन्। तपाईंले आफ्नो सपना पूरा भएको देख्नको लागि तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। तपाईंको प्रेममा अनुमोदन नहुन सक्छ। यो नयाँ वा ताजा व्यापार प्रस्तावहरूले तपाईंको दिनलाई रोशन गर्ने समय हो। तपाईं किनमेलको लागि जानुभयो भने धेरै खर्चालु नहुनुहोस्। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आजभोली कुनै खुशी छैन; आफ्नो जोडीसँग कुरा गर्नुहोस् र साँच्चै रमाइलो केही योजना गर्नुहोस्।
आनन्ददायी यात्रा र सामाजिक भेलाहरूले तपाईंलाई तनाउमुक्त र खुसी राख्नेछ। सामाजिक कार्यक्रमहरू प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग आफ्नो तालमेल सुधार गर्न सही मौका हुनेछन्। तपाईंले आफ्नो प्रेमीको एउटा नयाँ अद्भुत पक्ष देख्न पाउनु हुनेछ। आफूलाई धोखाबाट सुरक्षित राख्नको लागि व्यापारमा चनाखो हुनुहोस्। पुरानो कुनै मित्रले तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछ र यस दिनलाई अविस्मरणीय दिन बनाउने सम्भावना छ। विवाह पछि पाप उपासना हुन्छ, र तपाईंले आज धेरै उपासना गर्न सक्नु हुनेछ।
तपाईंका जोडीको वफादार हृदय र साहसी जाँगरले आनन्द दिन सक्छ। प्राचीन वस्तु र गहनामा लगानी गर्नाले लाभ र समृद्धि हुनेछ। कुनै मानिसहरू मात्र तपाईंको मुटु छाम्न खोज्छन्, यस्तालाई ध्यान नदिनुहोस्। एउटा आश्चर्यको सन्देशले तपाईंलाई राम्रो सपना दिनेछ। आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेपछि तपाईंको दृढ प्रतिबद्धता साधन हुनेछ। तपाईं आफ्नो सपना साकार भएको पाउनुहुनेछ। यसलाई आफुबाट फुस्केर जान नदिनुहोस्, र इमानदार भएर मेहनत गरिरहनुहोस्। आफ्नो जोडीले जब सबै कुराहरू भूलेर तपाईंलाई माया गरेर अँगाल्नेछन्, तब जीवन साँच्चै रोमाञ्चक हुनेछ।
तपाईं आजको भावुक मुडबाट बाहिर निस्किन चाहनुहुन्छ भने विगतमा जानु आवश्यक छ। ठूलो समूहमा आफूलाई संलग्न गराएमा अत्यधिक मनोरंजक हुनेछ – तर तपाईंको खर्च भने धेरै माथि पुग्नेछ। तपाईंका परिवारका सदस्यहरूले सानो कुरालाई ठूलो बनाउने प्रयास गर्ने सम्भावना छ। तपाईंकी प्रियतमाका कठोर शब्दहरूले तपाईंको मुड व्यग्र हुन सक्छ। तपाईं मेहनत र धैर्य मार्फत आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुहुनेछ। आज आफ्नो जोडीले कठिन परिस्थितिमा तपाईंलाई सहयोग गर्नमा धेरै चासो नदेखाउन सक्छन्।
आज विगतका नराम्रो निर्णयहरूले हताशा र मानसिक उथलपुथल उत्पन्न गर्नेछन् – तपाईं असहाय भएर अब के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न असमर्थ हुन सक्नुहुनेछ – अरूबाट मद्दत माग्नुहोस्। साथीहरूसँग सांझ बिताउनु वा किनमेल गर्नु अत्यधिक सुखद र रोमाञ्चक हुनेछ। कसैले पनि तपाईंको प्रेम अलग गर्न सक्ने छैन। तपाईंले उच्च पदका मान्छेसँग बाहिर गएर निवेदन गर्नु आवश्यक छ। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज अचम्मको समाचार प्राप्त हुन सक्छ।
कामको दबावले आज केही तनाउ ल्याउन सक्छ। आफ्नो ठूलो पार्टी सबैलाई लिनुहोस् – आज तपाईंसँग आफ्नो समूहको लागि कार्यक्रम संगठित गर्ने ऊर्जाको अतिरिक्त मात्रा हुनेछ। संलग्न भएकाहरूले आफ्नी भावि पत्नीमा ठूलो आनन्द पाउनेछन्। तपाईंको कठिन परिश्रम र समर्पणले आफैं बोल्नेछ र तपाईंको विश्वास र समर्थनलाई जित्नेछ। आजको दिन ‘पागल हुने’ दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।